19 Best 2022 Zimbabwe Trips, Tours & Vacation Packages
Top Zimbabwe Tours & Trips in 2022
Discover Zimbabwe in 2022 on one of these amazing trips hand selected by the travel experts at Adventure Life. Select any of the below 19 top-rated trips where you will explore Victoria Falls, Victoria Falls Airport, Zimbabwean Victoria Falls, Matusadona National Park, and Hwange National Park with an exceptional bilingual guide on a small group or customizable private tour. The most popular things to do in Zimbabwe in 2022 are wildlife viewing, village visits, wilderness lodge exploration, helicopter tours, and wine tasting. Our trips to Zimbabwe in 2022 range in price from $1,250 to $18,644 for trips of 5 to 17 days. Contact one of Adventure Life's expert Zimbabwe trip planners for help planning a seamless experience.
2022 Zimbabwe trips (19)
2023 Zimbabwe trips (16)
2024 Zimbabwe trips (11)
Zimbabwe Wildlife & Safari Exploration (17)
Zimbabwe Land Tours (9)
Zimbabwe River Cruises (9)
Zimbabwe Cruises (8)
Zimbabwe Cultural (6)
Zimbabwe Luxury (3)
Zimbabwe Trips by Activity
Zimbabwe wildlife viewing (17)
Zimbabwe village visits (13)
Zimbabwe wilderness lodge exploration (10)
Zimbabwe fishing (3)
Zimbabwe land & sea exploration (3)
Zimbabwe helicopter tours (3)
Zimbabwe wine tasting (3)